Ime ihe ịga nke ọma na-akwalite nsonaazụ | Martech Zone
Monday, April 13, 2009 Tuesday, October 9, 2012 Douglas Karr
Blog nke Tripp Babbitt na akwukwo ozi na Echiche Sistemụ Ọhụrụ na-eto eto n'ezie na m.
Kemgbe o zutere Tripp na mmemme ikwu okwu mpaghara, ọ kesara m ọtụtụ ihe ọmụma na ahụmịhe m, na akwụkwọ akụkọ ya, na blọọgụ ya.
Otu ihe kpatara m ji chee na enwere m obi ụtọ na ederede ya na nkuzi ya bụ na Tripp ji obi ọjọọ na-enyocha azụmaahịa ma na-achọpụta na nha na ebumnuche anaghị adaba na nsogbu ndị ahụ.
Ihe atụ bụ ụlọ ọrụ na-atụle ọnụ ọgụgụ nkwado ndị ahịa na-akwụghachi ndị ahịa ya ụgwọ dabere na olu oku ha nwere ike mezue. Dị ka Tripp na-akọwa, ụlọ ọrụ ahụ enyochaghị ihe kpatara ha ji na-akpọ oku na ihe ọnụ ahịa ndị ahịa na-eri dị ka iji tụnyere imezi ihe nsogbu nke mere ka oku a buru uzo.
E kewara nsogbu na mgbaàmà ahụ n'etiti ngalaba abụọ anaghị arụkọ ọrụ ọnụ na enweghị ebumnuche ha niile. Enweghị uru ọ bụla idozi esemokwu mbụ ebe nsogbu ndị ọ na-akpata na-enyefe ha na ngalaba ọzọ.
Ruo oge ụfọdụ, anọla m na-akwado ịchọta ihe na-arụ ọrụ ma na-edozi ya nke ọma, kama itinye uche n'ihe na-adịghị arụ ọrụ.
E nwere ọtụtụ nke ndị isi ama na usoro azụmaahịa nke kwenyere na nke ọzọ… ha ga - agwa gị na ọ bụrụ na ị nwere ihe ịga nke ọma 99%, ị ga - arụ ọrụ iji meziwanye 1% ikpeazụ. Ọ bụ usoro na-akụda mmụọ na-enweghị njedebe ma na-ahapụ ụzọ nke ndị ọrụ a chụrụ n'ọrụ na ndị nwere nkụda mmụọ.
Ekwenyere m na ndị isi, ụlọ ọrụ na usoro dị iche iche na-eme nke ọma karịa ịme karịa ọdịda:
Na soshal midia, abụrụ m onye nkwado na-enyere ma na enyere ndị ụlọ ọrụ aka iji mgbasa ozi mmekọrịta kama itinye iwu na oke.
Na ịde blọgụ, M na-agbalị iji hụ ọdịnaya m dere bụ ihe niile gbasara na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ịnwale teknụzụ ọhụrụ karịa ịzere ha.
Dị ka onye ndu, ekwenyere m na dakọtara na ndị ọrụ nwere ikike maka mkpa nke nzukọ a kama ịnwa ịmanye ndị ọrụ ịbanye n'ọkwá dị elu. Ọ bụrụ na ị nwere spana, agwala ya na ọ bụghị ezigbo hama. Gaa nweta hama ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị chọrọ.
Na azụmaahịa ọnlaịnụ, ọ dị mkpa ka ị gaa n'ihu tweak ihe na - arụ ọrụ na ntanetị ịntanetị kama ịnwa ịchọpụta idozi ihe anaghị arụ ọrụ. O doro anya na ị kwesịrị ịnwale mgbe ohere dapụtara, mana na-agwa ndị na-ege gị ntị ihe ịga nke ọma kama ịnwa ị zere ọdịda.
Ọbụna dị ka nne ma ọ bụ nna, achọpụtawo m na usoro a ka mma. Ọ bụrụ na ụmụ m hụrụ Math n'anya (nke ha na-eme) mana enweghị mmasị na Social Studies, emeghị m ka ha gụọ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme kwa abalị… M gbara ha ume karị na Math. (Achọrọ m akara ule dị mma n'ofe niile, n'agbanyeghị). Mymụ m abụọ nwere akara ule dị elu… na nwa m nwoke ugbu a bụ nwa akwụkwọ na-asọpụrụ na IUPUI, na Math na Physics.
Ọbụna m na-agụ akwụkwọ na Sparkpeople, saịtị maka anyị bụ ndị buru oke ibu ma na-achọ inweta ahụike, na ọmụmụ ihe na-adịbeghị anya gosiri na ndị mmadụ megharịa minit 10 kwa ụbọchị nwere ihe ịga nke ọma karịa ndị na-arụ ọrụ oge 90 a kapịrị ọnụ. Mgbatị ahụ dị mkpirikpi na-enye mmetụta nke mmezu (kama nhụjuanya) na ndị folda nwere ike ịrapara na usoro ahụ.
Tags: njikwa mgbanwemelite nsonaazụjirichaa nke oma
Ihe ọchị ị dere banyere nke a taa, n'ihi na ụnyaahụ m zutere Carla na Anna nke Ignite HR Consulting na ha tụlere usoro ọzụzụ ha na-enye akpọrọ "Ike" nke na-ada ụda maka ọkwa a. Oge m rutere bụ na mmemme ike - kama ịchọ ịkwalite adịghị ike - na-enyere onye ọ bụla aka ịmata ike ha, ya bụ, ihe ha dị mma na ihe ha nwere mmasị na ya, yabụ ha nwere ike imekwu nke ahụ maka abamuru nke nzukọ na ọdịmma ha.
N'otu aka ahụ, ka m na-etolite, achọwo m itinyekwu ume m n'ihe ndị ahụ m masịrị ma na-atọ ụtọ, n'ihi na: a) enwere naanị ọtụtụ awa n'ụbọchị (na na ndụ), yabụ gịnị mere ị gaghị anwa ịme mma ihe m nwere ike; b) enwere otutu ihe na m aghaghi ime nke na adighi m nma ma obu na enweghi m obi uto; na c) ọ na-enye ike iji wulite ihe ịga nke ọma na ihe ịga nke ọma (n'agbanyeghị ma ha buru ibu ma ọ bụ obere ihe ịga nke ọma, n'ihi na ana m ewere ihe m nwere ike inweta. :)).
Nwee ọmarịcha ụbọchị, enyi m.
Na-elekwasị anya na ihe ndị dị mma na ihe ị na-anụ ọkụ n'obi. Abụghị m onye mmebe weebụ yana agbanyeghị na m nwaa, agaghị m anwa ịchịkwa ya. Enwere ndị ọzọ nọ ebe ahụ, ndị na-aga n'okporo ụzọ ga-arụ ọrụ ka mma karịa m ma mee ya na obere nkụda mmụọ. Ekwesịrị m ilekwasị anya n'ihe na-arụ ọrụ maka m na ihe m dị mma ma na-akawanye mma n'ihe ndị ahụ.